Madaxweyne Gaas oo ka hadlay duqeyn mareykanka ay ka fuliyeen gobalka bari iyo Xanibaada ka taagan dekeda Boosaaso. – Gedo Times
Madaxweyne Gaas oo ka hadlay duqeyn mareykanka ay ka fuliyeen gobalka bari iyo Xanibaada ka taagan dekeda Boosaaso.
2nd December 2017 admin Somali News 0
Madaxweynaha maamulka puntland cabdi weli maxamed cali gaas oo wareysi siinaayay BBCda ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo duqeymaha diyaaradaha mareykanka ay ka fuliyeeen deegaan hoostaga gobalka barri kaasi oo lala bartilmaameydsaday sida lasheegay Xarun daacish ay ku leehaayeen gobalka barri.
Mr gaas oo sii hadlayay ayaa tibaaxay ka hor duqeymaha mareykanka inta aysan dhicin ay hslkaasi weerareen ciidmada Amaanka oo uu leeyahay Puntland.
Cabdi wali maxamed cali gaas madazwrynaha mamulka puntland ayaa soo hadal qaaday xanibaada ka jirta dekada magaaalada boosaaso kaasi oo ku sheegay inaysan wax dhibaaato ka ah ka taagneyn hasayeeshee diyaar ay u yihiin in maamulkiisa uu lakulmo ganacsatada wax kusoo dejisatada dekada weyn ee boosaaso.
Hadalka cabdi maxamed cali gaas ayaaa yimid kagadaal markii dhawaanahana diyaaradaha mareykanka uu duqeymo ka fuliyeen deegaan hoostaga gobalka bari, duqeymahaasina waxaaa lala beegsaday Amiir sare ee daacish kamid ahi.
Shir looga hadlayay Howlgalka AMISOM oo ka dhacay Addis Ababa
Gudoomiyaha Gobalka Shabeelaha Dhexe oo degmada cadale u tagay ka qeyb galka shir lagu heshiisiinayo beelo dagaalamay.